SUPERBAHİS983 NAZIM SANGARE: GÖKHAN GÖNÜL'E FORMAYI BİR DAHA VERMEM - SÜPERBAHİS786.COM GİRİŞ
Fenerbahçe na azu aka nri nke National Team Nazım Sangare kwuru okwu tupu egwuregwu Kroeshia.
Onye egwu bọọlụ mba bụ Nazim Sangare kwuru na ha chọrọ iji ezigbo bọọlụ merie Croatia, “Anyị na-apụ ịmeri ka ọ dị na mbụ. Ọ bụrụ na anyị enyee narị pacenti anyị, anyị ga-emeri echi.” kwuru.
“Achọghị m inye ụdị ahụ ọzọ”
Nazım, Na ajụjụ a “Gökhan Gönül na-egwuri egwu na ndị otu gị. A họrọla gị na National Team. Gini ka ị chọrọ ikwu banyere ọnọdụ a?” Ekwesịrị m inwe ndidi. Ekwenyesiri m ike na onye nkuzi ga-enye m ohere ma nye m jesịa ahụ, m ga-enye nke kacha mma, achọghị m ịnye mgbasa ahụ ọzọ. Ekwenyesiri m ike na agaghị m. ” p>
Mgbe ọ na-ekwu maka ajụjụ gbasara Naz Speakingm, Şenol Güneş kwuru, sị, Gökhan bụkwa onye egwuregwu dị oke ọnụ ahịa nye anyị. Ọ bịara n’oge okpu mbụ. Ọ nyere nnukwu onyinye. Ọ merụrụ ahụ. mkpa ga – adighi mkpa ihe kpatara ya. Gökhan nwa nwoke buru ibu nke Turkey. Anyị na – emepekwa ụzọ anyị maka ndị egwuregwu niile, mana nke a apụtaghị na anyị na – enweta onye ọkpụkpọ ọ bụla. A na – ewere ikike onye ọkpụkpọ ahụ dị mkpa ma ọ bụrụ na ọ siri ike na omume. Ana m akpọ ebe a n’ihi na echere m na ndị egwuregwu niile kwesịrị ime ihe kachasị mma maka mba a. Ahụghị m ihe ziri ezi iji merụọ ndị otu anyị obere ọrụ a. Onye ọkpụkpọ na-eche n’akụkụ nwere ike ịbanye n’ubọchi echi.Mgbe ịlele ndị otu a, e nwere Burak na Caner afọ 9 gara aga. Caner, Croatia Ọ laghachiri n’egwuregwu ya, anyị na Croatia ga-egwu ọzọ na Nọvemba 11. E nwere ndị egwuregwu abụọ si n’òtù ahụ. Ndị otu ahụ agbanweela kpamkpam Nke a ga-eme. Anyị bịara n’ụgbọ okporo ígwè maka ọrụ, anyị ga-eme nke kachasị mma na nke ziri ezi. Ọ ga-abụ eziokwu ma ọ bụrụ na anyị etinye uche na okwu a. “ O kwuru.
“TURKEY football football siri ike”
Nwa amaala nke Germany Nazim, na ajụjụ banyere ọdịiche nke bọọlụ German na nke Turkish “bọọlụ dị na Turkey ntakịrị sie ike, dị ike karị, anyị na-etinye mkpa na teknụzụ ndị ọzọ. Ha na-anwa ịdọ aka na ntị na Germany. Enwere ndị ọzọ ngwa ngwa na-egwu bọọlụ Mana bọọlụ Turkish na – eto nwayọ nwayọ. “ chọtara nyocha.
SUPERBAHİS983 BRENDAN RODGERS: ÇAĞLAR’IN İYİLEŞME SÜRECİ İYİ GİDİYOR SUPERBAHİS983 YÜKSEK ORANLI BAHİS SİTELERİ SUPERBAHİS991 BAHİS SİTESİNİN KAZANÇLARI SUPERBAHİS746 BAHİSLE KAZANÇ SAĞLA SUPERBAHİS983 SALZBURG MİLLİ TAKIMA OYUNCU GÖNDERMEYECEK SUPERBAHİS983 SAMATTA’NIN GOL SUSKUNLUĞU DEVAM EDİYOR SUPERBAHİS746 KAÇAK İDDAA OYNAYARAK KAZAN SUPERBAHİS746 MOBİL BAHİS ÖDÜL SUPERBAHİS983 PSG’DE NEYMAR’IN ARDINDAN MBAPPE DE LEİPZİG MAÇINDA YOK SUPERBAHİS746 TİB YER Mİ SUPERBAHİS746 TUTTUR ORANLARI SUPERBAHİS983 SİVASSPOR-GALATASARAY – CANLI SKOR SUPERBAHİS746 CASİNO OYNAYARAK KAZAN SUPERBAHİS746 KAÇAK BAHİS SUPERBAHİS746 ÖDÜYOR MU SUPERBAHİS746 HOŞGELDİN PROMOSYONU SUPERBAHİS746 CANLI İZLESENE SUPERBAHİS746 KAÇAK BAHİS BONUS SUPERBAHİS983 CASİNO SİTE ADRESLERİ SUPERBAHİS991 BAHİS KUPONLARI
3 Comments on SUPERBAHİS983 NAZIM SANGARE: GÖKHAN GÖNÜL’E FORMAYI BİR DAHA VERMEM
CANSU November 12, 2020 at 3:30 pm
ALPER November 17, 2020 at 12:20 pm
ABDULSELAM November 20, 2020 at 12:10 pm